सुर्खेतमा न्याय दिने उच्च अदालतकै बेहाल !
न्याय माग गर्दै सर्वसाधारण अदालतमा गुहार माग्छन् तर सुर्खेतको उच्च अदालतको आफ्नै बेहाल छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतमा इजलाश बस्ने कोठा समेत पर्याप्त छैनन् । ६ दशक पुरानो भवनमा उच्च अदालतले २ वटा इजलाश मात्र बसाल्नुपर्ने बाध्यता हुँदा मुद्दा फर्छ्यौटमा समस्या देखिएको छ ।
अदालतमा ७ जना न्यायाधीशको दरबन्दी भएपनि ६ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् । कम्तिमा दैनिक ३ वटा इजलाशबाट मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश हुँदा पनि कोठा अभाव भएका कारण इजलाश बसाल्न समस्या भइरहेको उच्च अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।
‘अदालतमा रिटको संख्या बढिरहेको छ । पुनरावेदन गर्न आउनेहरूको संख्यामा पनि बढोत्तरी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘न्यायाधीश भएर पनि कोठाको पालो पर्खनुपर्दा मुद्दाको छिनोफानो गर्न समय लाग्ने गरेको छ ।’ उच्च अदालतमा उत्प्रेषक, उत्प्रेषण, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश र निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने खालका रिट पर्ने गरेका छन् । बैंकिङ कसूर र वाणिज्य सम्बन्धी मुद्दा पनि अदालतमा पर्छन् ।
उच्च अदालत सुर्खेतका नाममा जिल्ला अदालत सुर्खेत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको बीचमा २ विगाहा ४ कट्टा पौने ७ धुर जग्गा छ । ‘जग्गा भएर मात्रै के गर्नु ? त्यहाँ भवन बनाउनको लागि पैसा नै छैन,’ सूचना अधिकारी मल्ल भन्छन्, ‘६ दशक पुरानो भवनमा विभिन्न कार्यालय बसेका थिए । अहिले उच्च अदालत छ । यो जग्गा नगर विकास समितिको हो ।’
थोरै वर्षा हुँदा पनि उच्च अदालतको भवन चुहिने गरेको उनले गुनासो गरे । ‘थोरै वर्षा भएपनि पानी चुहिन्छ । कागजात बचाउन गाह्रो भएको छ,’ उनले भने ।
उच्च अदालतमा आएका ५१ उजुरीमध्ये २७ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेका छन् । अदालतमा बैंकिङ कसूर सम्बन्धी ८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अदालतको अवहेलना सम्बन्धी १ मुद्दा, राहत क्षतिपूर्ति सम्बन्धी १ मुद्दा र १ मुद्दामा मध्यस्थता गरी फर्छ्यौट भएको छ । ४० वटा विभिन्न रिट दायर भएकोमा २४ वटाको टुंगो लागिसकेको सूचना अधिकारी मल्लले बताए ।
पुनरावेदन सहितका आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ४४२ वटा मुद्दा परेकोमा ३७८ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५७७ मुद्दा दर्ता भएकोमा ४८९ मुद्दा फर्छ्यौट भए । चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ४४६ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने २२५ मुद्दा फर्छ्यौट भई २२१ मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी रहेका छन् ।